၅ အားသာချက်များရင့်ကျက်သောစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းသည်ရိုးရာစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းဖြစ်စဉ်များထက်ကျော်လွန်သည် Martech Zone
ကြာသပတေးနေ့, မေလ 18, 2017 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, မေလ 24, 2017 Douglas Karr
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့အစည်းများကြီးထွားလာသည်နှင့်အမျှပြproblemsနာများပိုများလာသည်။ အဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခုသည်သုံးလတစ်ကြိမ်ထုတ်လွှတ်မှုများပြုလုပ်နိုင်ပြီးရာနှင့်ချီသော developer များကထောင်ပေါင်းများစွာသောကုဒ်နံပါတ်များကိုဒေသတွင်းကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်သော်လည်းအရည်အသွေးအာမခံချက်အောက်တွင်ခေါင်းကိုက်ခြင်းနှင့်တိုက်မိခြင်းများဖြစ်စေခဲ့သည်။ ထိုတိုက်ဆိုင်မှုများကြောင့်အင်္ဂါရပ်များအားဖယ်ရှားခြင်း၊ ဖြန့်ချိမှုများအတွက်နှောင့်နှေးခြင်းနှင့်လမ်းပိတ်ဆို့မှုများကိုကြိုးစားဖယ်ရှားရန် command of up နှင့် down အစည်းအဝေးများသို့ ဦး တည်သွားလိမ့်မည်။ ခေတ်ရဲ့သွက်လက်တဲ့နည်းစနစ်တွေဟာကွဲပြားခြားနားတဲ့ချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးရေရှည်ရလဒ်များကိုစီးရီးများမှတစ်ဆင့်အတူတကွ ပူးပေါင်း၍ စွမ်းရည်ရှိသောအဖွဲ့များကိုအသုံးပြုသည် ဇီးကွက်.
ယနေ့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းဗျူဟာများသည်ကုမ္ပဏီများအားဖြတ်သန်းရန်လိုအပ်သည် ခေတ်ရဲ့သွက်လက်တဲ့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးခရီး တက်ကြွစွာတက်ကြွစွာလုပ်ဆောင်ရန် omni-channel မဟာဗျူဟာများသည်အဖွဲ့အစည်း၏ရည်မှန်းချက်များကိုပြည့်မီနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုအရှိန်အဟုန်မြှင့်တင်ပေးသည့်တူညီသောလုပ်ငန်းစဉ်များကိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့များတွင်အသုံးပြုသည်။ CMG အပေါင်းအဖေါ်များမှဤသတင်းအချက်အလက်တွင်၎င်းတို့ရည်ညွှန်းသည် ခေတ်ရဲ့သွက်လက်တဲ့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးစနစ်အတွက်.
မှန်ကန်သောအလုပ်ကိုလုပ်ခြင်း - စျေးကွက်သမားများသည်ဖောက်သည်များအနေဖြင့်အတွင်း၊ အစဉ်အလာနှင့်အဆင့်အတန်းမြင့်မားသောဖြစ်စဉ်များထက်လိုအပ်သည့်အရာများကိုအာရုံစိုက်သည်။
အချိန်မီအကောင်အထည်ဖော်ခြင်း - သံသရာကိုတိုစေခြင်းနှင့်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးနှင့်အားထုတ်မှုကို ဦး စားပေးခြင်းအားဖြင့်, စျေးကွက်ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်များကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာတုံ့ပြန်နိုင်ပါတယ်။
မှန်ကန်တဲ့လူတွေဆီရောက်ဖို့ - ပူးပေါင်းအဖွဲ့များနှင့်တက်ကြွသောနည်းဗျူဟာများသည်မှန်ကန်သောသတင်းစကားကိုသင့်တော်သောအချိန်တွင်မှန်ကန်သောဖောက်သည်များအားပစ်မှတ်ထားသည်။
အကျိုးရလဒ်များကိုရယူခြင်း - Silo များနှင့် streamlining ဖြစ်စဉ်များကိုဖြိုခွဲခြင်းသည်အမြင့်ဆုံးရောက်ရှိနိုင်မှုနှင့်ရလဒ်အတွက်မက်ဆေ့ခ်ျပို့ခြင်းများကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေနိုင်သည်။
ပိုကောင်းအောင်နှင့်တိုးတက်အောင် - ပြီးခဲ့သည့် Sprint မှရရှိသောသင်ခန်းစာများကိုနောက်လာမည့်တွင်ထပ်မံတိုးချဲ့ပြီးစျေးကွက်ရှာဖွေရေး ROI ကိုစဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်အောင်လုပ်သည်။
Tags: တာဝန်ခံမှုခေတ်ရဲ့သွက်လက်ခေတ်ရဲ့သွက်လက်တဲ့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးခေတ်ရဲ့သွက်လက်တဲ့နည်းစနစ်Cross-functional ဖြစ်စေဖောက်သည်အာရုံစူးစိုက်စမ်းသပ်ဆဲအဆင့်ဆင့်ကြားမှာလျင်မြန်စွာသင်ယူမှုအန္တရာယ်ဆန္ဒရှိရိုးရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးရေတံခွန်